कोरियाका लागि खुल्यो रोजगारी, ९,६५४ जनाको आ,वेदन खुला ! – Nepal Online Khabar
कोरियाका लागि खुल्यो रोजगारी, ९,६५४ जनाको आ,वेदन खुला !
फागुण ३०, २०७८ सोमबार 118
काठमाडौं : नेपाल सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन नौ हजार ६५४ जनाको आ’बेदन खुला गर्ने भएको छ।
बैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखाले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आ’वेदन माग गर्ने जनाएको हो । सो शाखाका अनुसार २०२२-२०२३ मा दक्षिण कोरियाले उत्पादनतर्फ छ हजार २१४ हजार र कृषि तथा पशुपालनतर्फ दुई हजार ७४१ अमिक लैजाने भएका छन् ।
एक व्यक्तिले एउटा क्षेत्रमा मात्रै आ’बेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। जुन क्षेत्रका लागि परीक्षा आ’वेदन फाराम भरेको हो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि त्यही क्षेत्रमा मात्र रोजगार आ’बेदन फाराम भर्नुपर्नेछ।
सो शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले कृषि तथा पशुपालनतर्फ छनोट भएका व्यक्तिले सन् २०२२ भित्रै दक्षिण कोरिया पुगेर काम सुरु गर्न सक्नेछन् भने उत्पादनतर्फ छनोट भएका व्यक्तिले सन् २०२२ मा काम सुरु गर्ने जानकारी दिए। ईपीएसको आ’वेदनसँगै खुलाए पनि कृषितर्फको परीक्षा छिटो सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।
यस पटक कृषिबाट जाने अमिकका लागि परीक्षा ट्यापको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको निर्देशक कटुवालले बताए । उनका अनुसार ट्यापको माध्यमबाट लिइने उक्त परीक्षामा दैनिक २०० जना सहभागी हुन सक्न गरी व्यवस्था गरिएको छ । -यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
PrevDifferent Ways to Prepare food BBQ
Nextप्रकाश सपुतलाई माओ‌वादी विद्यार्थी नेताको चेता’वनी- तपाईँको हर्कत हसेर बस्दैनौं ।